पूर्वराजा शाहले लगाइदिए सर्वसाधारणलाई टीका - नेपालबहस
गृहपृष्ठ फीचर्ड (ट्रेन्डिङ) पूर्वराजा शाहले लगाइदिए सर्वसाधारणलाई टीका
पूर्वराजा शाहले लगाइदिए सर्वसाधारणलाई टीका
काठमाडौं । विजया दशैको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मंगलबार सर्वसाधारणलाई टीका लगाइ दिएका छन् ।सर्वसाधारणलाई मंगलबार पूर्वराजा शाहले आफ्नै निवासमा टीका तथा जमरा लगाइ दिएका हुन ।
पूर्वराजा शाहको हातबाट टीका थाप्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतालगायत शुभेच्छुक र सर्वसाधारणहरु निर्मल निवास पुगेका थिए । पूर्वराजाको हातबाट टीका थाप्नेको निर्मल निवासको मुख्य गेटअगाडि भीड लागेको थियो ।
अघिल्लो लेखअनाथ बालबालिकाले लगाए दशैँको टिका
अर्को लेखप्रधानमन्त्रीले लगाइदिए सर्वसाधारणलाई टीका
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भन्छन- जनताको स्वास्थ्यमाथि ओली सरकारको खेलबाड !
पूर्वराजा शाह भन्छन्, आफ्नो मातृभूमिको सम्पूर्ण भु-भागसहितको नक्सा विश्वसामु प्रस्तुत गर्नु सह्रानीय कार्य हो
चौतर्फी बिरोधपछि पूर्वराजा शाहले पाए सवारी पास, आजै काठमाडौं आउने
कष्टकर परिस्थितिमा धैर्यताका साथ सुरक्षित बस्न पूर्वराजा शाहको आग्रह
पूर्वराजा भन्छन्, नागरिकका दैनिक समस्याप्रति सम्बोधन नहुनु निराशाजनक !
“सत्य कहिल्यै हार्दैन, स्वाभिमान कहिल्यै मर्दैन”- पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगरमा